विराेधीहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीकाे प्रश्न- ‘चुनावमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नुभएको हाे कि केलाई ?’ « News24 : Premium News Channel
विराेधीहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीकाे प्रश्न- ‘चुनावमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नुभएको हाे कि केलाई ?’
काठमाडौं, ३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘चुनावमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नुभएको हाे कि’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा तीन वर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरु सुनाउनुअघि आफूविरुद्ध उत्रिएकाहरुलाई प्रश्न साेध्दै केलाइ प्रतिगमन भनको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमनजस्ता आरोप सुन्दा उदेक लाग्छ । साथीहरु लाञ्छना थोपर्दै हुनुहुन्छ । केलाई प्रतिगमन भनिन्छ ? ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन हुँदा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली समाप्त हुन्छ ? म सरकारमा टाँसिएर बस्न खोजिरहेको छैन । म जनताका सामु जान खोज्दा कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ ?’
राजनीतिक प्रश्नको निरुपण फौजदारीबाट नभएर जनताबाटै हुने उहाँले बताउनुभएको छ । ६४ प्रतिशतको मजबुत सरकारलाई चल्नै नदिएपछि जनतासमक्ष कबुल गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न पुनः जनता सामु जानुभन्दा अर्काे विकल्प नरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
१०९३ दिन अर्थात् ३ वर्ष कार्यकालको ब्रिफिङअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्दै त्यसका कारणहरुबारे पनि उहाँले सर्सती सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ‘सुरुसदेखि नै सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारा सिर्जना भए । पछिल्लो एक वर्षदेखि दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न दलको गठबन्धन, नियति ब्यहोर्नुपर्यो सरकारले । अर्कातिर, खुट्टा अल्झाएर काम गर्न दिइएन । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा उल्झन भयो । आफ्नै दलको चाहिने । राजदूत खाली छन्, नियुक्ति हुन दिइँदैन ।सरकारलाई विस्थापित गर्न महाभियोग लगाउन खोजियो ।’
साथै, अब सिंहदरबार कार्यालयमै बसेर जिम्मेवारी बहन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।